Ball Valves, Eriri Fittings, Obere bọl valvụ - Kaixuan
Anyị na-elekwasị anya na igwe anaghị agba nchara anwụrụ oyiyi akwa na valves n'ihi na ihe karịrị afọ 18.
Anyị bụ ndị otu ezinụlọ nwere, Maazị Yan ụmụnna guzobere KX Co. (Anping County KaiXuan anaghị agba nchara ngwaahịa Co., Ltd.) ma wuo Nkedo & CNC osisi na 2002. Mr. Yan ụmụnna 'obere ọgbọ isi KX Co.' Ọganihu azụmahịa ụwa, atụmatụ, na ahịa.
ele ngwaahịa niile
ọ mans ọkachamara ịcha na-egweri ọrụ, ọkachamara ule ule akụrụngwa nwere ezi njikwa na mmiri mgbali na ikuku nsogbu nchọpụta n'oge ngwaahịa nnyocha.
Team nka na ụzụ
Nkwado Nkwado siri ike
Ikike imepụta kwa ọnwa bụ tọn 100. Ọkpụkpụ akụrụngwa nke mepụtara onwe ya na -emepụta ihe ọ bụla 3,000 kwa ụbọchị, nke dị okpukpu atọ karịa nke ebu ebu.
Ejiri dị ka njikọ nke ọkpọkọ maka njem nke mmiri, mmanụ, gas, na ụdị corrosive ọ bụla kwesịrị ekwesị maka igwe anaghị agba.
Ngwa: mmiri, mmanụ ala, kemịkalụ, ụlọ ọrụ ọkụ, akụrụngwa ọkụ, ọgwụ, wdg.
KX na-enye ndị ahịa ụwa niile nkenke itinye ego na ihe ha chọrọ.